Malta ma lagu celiyaa mise maya? | Somaliska
Garsoorayaal qaadayey maxkamadda qaxootiga Malmö ayaa maalintii shaley ku kala qeeybsamey go'aan la xiriira in dib loogu celiyo dalka Malta iyo inkale wiil soomaali ah oo 17 jir ah laguna magacaabo Abdikader Abukar Barhadles. Sharci yaqaankii gudoominayey maxkamadda ayaa go'aankaas looga codbatey ka dib markii ay saddex garsoore isku raaceen in wiilkaas soomaaliga ah dib loogu masaafuriyo dalka Malta,sida uu qorey wargeeyska maalinlaha ah ee Dagens Nyheter. Abdikader Abukar ayaa go'aankaas ka dib wuxuu walwal ka hayaa mustaqbalkiisa wuxuuna halis ugu jiraa in dib loogu masaafuriyo dalka Malta oo ah dalkii uu markii ugu horeeysey iska dhiibey,iyadoo loo cuskanayo xeeerka Dublin. Xeerka Dublin ayaa dhigaya in qofka magangalyo doonka ah oo iska dhiiba dal yurub ah, ay tahay in go'aanka la xiriira arrimihiisa qaxootinimo looga gaaro isla dalkaas uu markii hore iska dhiibey laakiin uusan qofkaas qaxootiga ahi xaq u laheeyn in uu dal kaleeto oo yurub ah magangalyo weeydiisto. Maxkamaddaas qaxootiga ee Malmö ayaa sidoo kale dhawaantaan go'aamo iska hor imaanaya ka gaartey wiil kaloo da' yar oo isna soomaali ah kaas oo dalka Malta ka yimid hal sano iyo bar ka hor . Maxkamadda ayaa markii hore Haa ku go'aamisey in wiilkaasi qaxootinimo ka dalban karo dalkaan Iswiidhan inkastoo ay markii danbe isla maxkamaddaasi soo saartey go'aan Maya ah oo kii hore ka hor imaanaya. Waxaa qoray: Sveriges Radio.
Garsoorayaal qaadayey maxkamadda qaxootiga Malmö ayaa maalintii shaley ku kala qeeybsamey go’aan la xiriira in dib loogu celiyo dalka Malta iyo inkale wiil soomaali ah oo 17 jir ah laguna magacaabo Abdikader Abukar Barhadles.
Sharci yaqaankii gudoominayey maxkamadda ayaa go’aankaas looga codbatey ka dib markii ay saddex garsoore isku raaceen in wiilkaas soomaaliga ah dib loogu masaafuriyo dalka Malta,sida uu qorey wargeeyska maalinlaha ah ee Dagens Nyheter.
Abdikader Abukar ayaa go’aankaas ka dib wuxuu walwal ka hayaa mustaqbalkiisa wuxuuna halis ugu jiraa in dib loogu masaafuriyo dalka Malta oo ah dalkii uu markii ugu horeeysey iska dhiibey,iyadoo loo cuskanayo xeeerka Dublin.
Xeerka Dublin ayaa dhigaya in qofka magangalyo doonka ah oo iska dhiiba dal yurub ah, ay tahay in go’aanka la xiriira arrimihiisa qaxootinimo looga gaaro isla dalkaas uu markii hore iska dhiibey laakiin uusan qofkaas qaxootiga ahi xaq u laheeyn in uu dal kaleeto oo yurub ah magangalyo weeydiisto.
Maxkamaddaas qaxootiga ee Malmö ayaa sidoo kale dhawaantaan go’aamo iska hor imaanaya ka gaartey wiil kaloo da’ yar oo isna soomaali ah kaas oo dalka Malta ka yimid hal sano iyo bar ka hor .
Maxkamadda ayaa markii hore Haa ku go’aamisey in wiilkaasi qaxootinimo ka dalban karo dalkaan Iswiidhan inkastoo ay markii danbe isla maxkamaddaasi soo saartey go’aan Maya ah oo kii hore ka hor imaanaya.
Waxaa qoray: Sveriges Radio.
ILAHAHAY DALKENA HANO NABDEYOO QURBO FAIDO MALEEH WADAREENKUJOOG DAL ADAN LAHEEN ILAHAY HANAGU NABADYELOO UMADA SOMALIYEED QULUBTODA EBE HAISKU KENYOOO XAMAR OO NABAD AH AN KULABANO ISH ALAAAH FREE LIVE IS HOME XAMAR CADEEY
ILAAHOW NA HANUNI SOMALI BADAN OOO RER GALBEDHA KU GALOBAY AYA JIRAAA AN AQAN ANI MARKA EBOW NA BAD BADI DAD BA DINTODI US DOLAR SISTAY OOO WAX MAGARATO AH OO CAQLIGA GALO KAXADAY MARKA ILAHOOW DINTENA MACAN NAGU NABADYEEL MELKASTO AN JOGNOOO WIXI MURTAT NOQDAYNA ILAHOW SO CELII OOO XAQA TUS ALAAAH ISLAM IS DA ONLY WAY
maxuu yahay goaanka qofka ka imaaday dalka talyaniga misane dalka joogay mo 2 sano ah sharcigii wadankaasina uu ka dhacsan yahay wali ma waxaa loo fiirinayaa xiriirka dublin mise waxaa loo fiirinayaa xiriiro kale
Abdisalaan inta aan ogahay qofka ka yimid Talyaaniga ee iska dhiiba halkaan waxaa loo fiirinayaa sharciga Dublin.